फुटसललाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ - पाँच प्रश्न - साप्ताहिक
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अन्तर्गतको फुटसल समितिका अध्यक्ष हुन्— रमेश रायमाझी । रमेश अहिले नेपाली फुटसललाई उकास्न सक्रिय छन् । नेपाली फुटसलका विषयमा रायमाझीसँग साप्ताहिकको पाँच प्रश्न :
फुटसलले औपचारिक मान्यता पायो, तर अझै गर्नुपर्ने काम धेरै छन् होइन ?
हो, धेरै काम बाँकी छन् । यसलाई विस्तारै विकास गर्नुपर्छ । हामी यसलाई परिस्कृत गर्दै जानेछौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको मैदान नहुँदा पनि समस्या छ नि ?
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान नभएको स्थितिमा त्यसले प्रभाव पार्छ नै । त्यसैले हामीसँग जति मैदान उपलब्ध छन्, त्यसमध्ये उत्कृष्ट स्थानको उपयोग गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।
यस क्रममा राष्ट्रिय फुटसल लिगलाई पनि अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ हैन ?
राष्ट्रिय फुटसल लिगलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ । एसियाली छनौटमा सहभागिता जनाएपछि नेपाली फुटसलले गति लिनेछ । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताले हामीलाई राम्रै शिक्षा प्रदान गर्नेछ ।
फुटसल कमिटीलाई पनि विस्तार गर्ने चुनौती होला ?
यसलाई अझ फराकिलो बनाउनुपर्छ । अहिलेको समितिलाई अझ विस्तार गर्नुपर्छ र जिल्ला फुटबल संघअन्तर्गत पनि कमिटीहरू बनाउनुपर्छ । त्यसले फुटसलको एउटा छुट्टै वातावरण तयार गर्नेछ ।
फुटसलका सम्बन्धमा थप योजना के छन् ?
फुटसललाई नेपाली फुटबलको दायरामा ल्याउनुपर्छ । फुटसलको विकासले नेपाली फुटबल खेलाडीहरूलाई पनि धेरै फाइदा पुर्‍याउनेछ भने उनीहरू आर्थिक रूपमा समेत सबल हुनेछन् । हामीले व्यवसायिक वातावरण पनि तयार गर्नुपर्नेछ । यसले नेपाली फुटबलको भविष्यलाई नै फाइदा पुर्‍याउनेछ ।
नेपाल बन्न तीन चिज खारेज गर्नुपर्छ
व्यवस्थित सहरीकरण र कृषिमा जोड
प्रेम प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ ?